Zimbabwe's Mnangagwa names senior military officials to cabinet posts - Independent.ie
Mr Mnangagwa is sworn in. Photo: AP
He named Patrick Chinamasa as finance minister, Air Marshal Perrance Shiri land minister and Major General Sibusiso Moyo foreign minister, among other appointments.
He also brought back many faces from the Robert Mugabe era, which could disapppoint Zimbabweans who had been expecting a broad-based government and a break with the past.
Emmerson Mnangagwa and his wife Auxillia arrive at the Zimbabwe presidential inauguration ceremony in the capital Harare. Photo: AP
Chinamasa, a former finance minister in Mugabe's government, moved to a newly created ministry of cyber security in a reshuffle last month. The cyber portfolio has been folded into the information ministry headed by a former deputy minister in Mugabe's government, Supa Mandiwanzira.
Emmerson Mnangagwa, center, and his wife Auxillia, center-right, arrive at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe (AP Photo/Ben Curtis)
Familiar feel as Zimbabwe's new leader fills Cabinet with loyalists and military
Zimbabwe flag protest pastor cleared of subversion charge
Return money to Zimbabwe or face arrest, warns Mnangagwa